Madaxweyne Recep Tayyip Erdoğan ayaa amaray weeraro ka dhan ah argagaxisada Syria. - Awdinle Online
Madaxweyne Recep Tayyip Erdoğan ayaa amaray weeraro ka dhan ah argagaxisada Syria.
Madaxweynaha Dowladda Turkey Recep Tayyip Erdoğan ayaa amar taliyaha ciidanka qalab sida si loo fuliyo howlgal ka dhan ah argagaxisada, Daqiiqado kooban ka hor ayuu Turkigu billaabay howlgal ciidan, oo ka dhan ah fallaagada kurdida Suuriya ee YPG. YPG waxaa la sheegay inay gacansaar la leedahay kooxda argagixisada PKK ee Turkiga dagaalka kula jirta.
In YPG laga saaro xuduudka Turkiga, In goob nabdoon (safe zone) laga abuuro si qaxootiga Suuriya ee Turkiga ku sugan dib ugu laabtaan dalkooda, in la dhowro madaxbannaanida iyo midnimada dhuleed ee Suuriya, ayadoo laga hortago in dawlad/maamul YPG leedahay uu xuduudka Turkiga iyo Suuriya ka dhismo.
Previous articleTurkey launches anti-terror operation in northern Syria, Erdoğan announces
Next articleMooshin laga gudbiyey Wasiirka Gaadiid & Duulista Hawadda